Trawling - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
Trawling constitutesavictual sector in the economic undertakings of The Union Of Myanmar. Fishery acquisition coastal and off shore systems in Ayeyarwady, Rakhine, Tanintharyi and Mon state are the main Location of Myanmar. There are (2500) off shore vessels in Myanmar and Ngwe Pinlae company with 80 to 120 ton off shore (47) vessels playing at Yangon, Tanintharyi, Myeik Regions, Yearly catching Fish/Prawn (5000) tons are product.
Basic Location of work - Yangon, Myeik
Region for Performance - Ayeyarwady,Tanintharyi, Rakhine
Quantity of Ships/Vessels - (47) Nos
Tonnage of Vessels - 80-120 GRT
Catch Fish production - Fish / Prawn(5000) MT per Year
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်
ရေယာဉ်စီးရေ ရန်ကုန် (၈) စီး ၊
မြိတ် (၃၉) စိး ၊
ပေါင်း (၄၇) စီး
ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများ ရန်ကုန် (၄) ခု ၊
မြိတ် (၁၆) ခု ၊
ပေါင်း (၂၀) ခု
ငွေပင်လယ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသည် ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုမြန်မာ့ ရေပိုင်နက်၏ ဧရာဝတီ၊ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီနှင့် မွန် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသ တလျှောက်တွင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ လှေတစ်စီးလျှင် တန်၈၀ နှင့် ၁၂၀ ကြားရှိသော ငါးဖမ်းရေယာဉ် (၄၇) စီးဖြင့် ဖမ်းယူလျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျင် ငါး / ပုစွန်တန်ချိန် ၄၅၀၀ တန် ခန့်ဖမ်းဆီး ထုတ်ယူလျှက်ရှိပါသည်။